श्रीमती सहित अमेरिकामा बस्दै आएका डाक्टर रोशनको यसरि भयो मृत्यु – live 60media
अमेरिकामा कार्यरत एक नेपाली चिकित्सकको मृत्यु भएको छ । न्युयोर्क रोचेस्टरस्थित रोचेस्टर जनरल अस्पतालमा कार्यरत ३३ वर्षीय डा. रोशन झाको शुक्रबार हृदयघातका कारण मृत्यु भएको हो । धनुषाको देवपुरा, रुपेठा घर भएका डा. झा सन् २०१८ देखि उक्त अस्पतालमा कार्यरत रहेका थिए । उनी श्रीमती श्वेता ठाकुरसहित अमेरिका बस्दै आएका थिए ।
श्वेता पनि मेडिकलको विद्यार्थी भएको र उनी न्युयोर्कको बफेलोमा डेन्टल मेडिसिनमा अध्ययनरत रहेकी छन्। शुक्रबार बिहान बिरामीको चेकजाँच गरेका उनलाई दिउँसो अचानक हृदयघात भएको र त्यसलगत्तै मृत्यु भएको बताइएको छ । कोरोना महामारीमा डा।. झाले अग्रपंक्तिमा रहेर बिरामीहरुको सेवा समेत गरेका थिए ।
रेजिडेन्ट कोर्सका लागि अमेरिका गएका डा. झाले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस र एमडी गरेका थिए । उनले केही समय काठमाडौंको अल्का अस्पतालमा समेत काम गरेका थिए । डा. झाको मृत्युप्रति मधेशी एसोसिएसन इन अमेरिकाले एक विज्ञप्ति निकालेर शोक व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवेदना समेत व्यक्त गरेको छ।
← भोलि सतबीज छर्ने दिन, यसपटक कोरोनाका कारण पशुपतिलगायत क्षेत्रमा शतबीज छर्न नपाइने
ढल्किदो उमेरमा पनि करिश्माको लोभलाग्दो सुन्दरता [फोटो-फिचर] →